Caddeyn: Qaraxyada weli way socdaan dowladana ballan qaadyo aan la fulin ayaa horey uga fakaday! - Hablaha Media Network
Caddeyn: Qaraxyada weli way socdaan dowladana ballan qaadyo aan la fulin ayaa horey uga fakaday!
HMN:- Waxaa weli Magaalada Muqdisho ka socdo qaraxyo ay sameenayaan ururka Al-Shabaab kuwaas oo dhibaato xoog leh loogu geysanayo shacabka islaamka ah ee Soomaaliyeed kasoo aan garaneyn sababta loo dilayo.
Ururka Al-Shabaab ayaa aaminsan inay tallaabooyinka noocaan oo kale ah janada ku galayaan, balse ilaa hadda lama arkin meel ay islaamka uga taal in qof muslim ah oo aan wax galabsan la qarxiyo dhiigiisana la baneysto.
Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ballan qaaday inay dowladda u dhisi doonto cid kasta oo ay Al-Shabaab ka burburiyeen hoteelada iyo gurayaha, sidoo kalana wuxuu ka dhawaajiyey inay dowladda daaweyn doonto dadka ku dhaawacmo qaraxyada Al-Shabaab halka dadka dhintana ay dowladda magdhow ka bixin doonto.
Haddaba qaraxyada kala joogsi malahan, dhimashada way badatay, dhismooyin badan ayaa dumay, welina lama arkin meel ay dowladda Soomaaliya wax badal ah u sameysay dadkii ay dhibaatada naf iyo maal ah kasoo gaartay qaraxyadaas.
Hadalkii uu Madaxweynaha ka dhawaajiyey ayaa noqday miid seef la bood ah, maadaama uu markii hore qoorta dowladda u geliyey wax aysan ka bixin Karin, maadaama aysan dowladd heysan miisaaniyad ku filan oo ay wax ugu qabato dadka ay Al-Shabaab dhibaatada u geystaan.
Dowladda Soomaaliya waxaa u dhaantay intii ay ballan qaad been ah sameyn laheyd inay ku ekaado tacsidii looga bartay dowladihii iyada ka horeeyey, maadaama ay tacsida iyo ballan qaadka beenta ah fiican tahay tacsida.
Marka sidaas la leeyahay kama dhigno in la mucaaradayo dowladda dhexe, balse waa xaqiiq jirto inaysan dowladda Soomaaliya wax u qaban dadkii ay wax kasoo gaareen dhibaatada ay Al-Shabaab ku hayaan bulshada Soomaaliyeed marka laga reebo dad ku dhaawacmay hoobiyayaal lagu tuuray xaafado ku dhow Madaxtooyada oo qaarkood ay dowladda u qaaday Turkiga, balse inta badan dadka ay dhibaatada nafta iyo maalka ah kasoo gaarto qaraxyda waxba looma qaban.